Ecotrust bụ onye na-ebute ụzọ nke Die Casting Machines na China. Ụlọ ọrụ zuru ụwa ọnụ nke nwere isi mmalite ọkọnọ dị elu, jikọtara ya na ihe karịrị afọ 10 na-aga n'ihu na-eto eto na ọnụ ọgụgụ ndị mmekọ na ndị ọrụ njedebe.
Ụlọ ọrụ anyị na-eduzi otu ndị isi raara onwe ha nye ma kwado ya site na otu ndị ọkachamara ọkachamara na-ahụ maka nkà na ụzụ bụ ndị na-ejikọta ihe karịrị afọ 10 nke ahụmahụ na-emepụta ihe nkedo ọnwụ.
Ecotrust Machinery nyere aka site n'aka ndị ahịa na-arụpụta nke ọma na ndị otu nkwado teknụzụ yana nyiwe teknụzụ na-emepe emepe nke na-enye anyị oke asọmpi. Site na ọnụ ahịa ezi uche dị na ya, ngwaahịa asọmpi na ọrụ nkwanye ùgwù anyị enwetala ntụkwasị obi na nnabata ndị ahịa. Anyị kwadoro onwe anyị ka anyị nọgide na-enwe aha ọma ma nọgide na-enye onyinye na Die Casting Machines.
Igwe Ecotrust lekwasịrị anya n'inye igwe nkedo anwụ anwụ na-arụ ọrụ kacha mma. Igwe igwe anyị kpuchie site na 25Ton ruo 3500Ton, ngwa kpuchiri alloy aluminum, magnesium alloy, alloy ọla kọpa na zinc alloy, nke a na-ejikarị eme ihe maka imepụta ụgbọ ala, ọgba tum tum, ngwa eletriki, ngwa elektrọn, nkwukọrịta, ọkụ, onyinye, ihe egwuregwu ụmụaka, arịa ụlọ. , kichin na ụlọ ọrụ ịsa ahụ. Ka ọ dị ugbu a, site na ahụmịhe bara ụba anyị, anyị nwere ike ịnye ngwọta zuru oke nke gụnyere igwe bụ isi, anwụ & ebu, akpaaka na akụrụngwa dabara adaba.
Igwe anyị na-arụ ọrụ nke ọma na enwere ike ịrụ ya ngwa ngwa n'enweghị nsogbu. Ha abụọ na-achọsi ike n'ahịa ma nwee ike ịhazi ya dịka nkọwapụta nke ndị ahịa na-enye.
Ugbu a, anyị nwere ndị ọrụ na ndị ahịa na Europe, America, Asia na Africa ahịa, wdg, na ọtụtụ ebe na-esonyere anyị n'afọ na-abịa. Anyị nwere olile anya na ị bụ onye na-esote ị ga-ahọrọ anyị!
Nye ihe ngwọta igwe nkedo anwụ anwụ na-akwụ ụgwọ kacha mma sitere na China.
A sị ka e kwuwe, anyị bụ enyi gị a pụrụ ịdabere na ya.
Teknụzụ na-eduga na igwe nkedo anwụ anwụ.
Na-enye gị ngwọta kachasị mma nke igwe nkedo anwụ anwụ.
Mepụta uru maka ndị ahịa anyị.
Okwu ndị dị mkpa gbasara igwe ihe nkedo anwụ anwụ Ecotrust
- Award dị ka Top 5 Brand na China;
- Guzosie ike na 2008, Ahụmahụ 10+ afọ na R&D na nrụpụta;
- PC ụlọ ọrụ: 700sets / afọ;
- Ndị otu ọkachamara, ahụmịhe ọrụ afọ 25+;
- Ntụgharị igodo oru ngo, otu nkwụsị ọrụ.
1. Ụlọ ọrụ na-etinye ego, ahịa kpọmkwem;
2. International ahịa & otu ọrụ;
3. Nzaghachi ngwa ngwa & nkwurịta okwu ka mma;
4. 7 × 24 nkwa ọrụ.